मृत्युलाई जित्दाको सुःखद महात्म्य | शहरबाट शब्दहरु
← स्वागतम् सामसुङ !
Posted on November 26, 2017 by Subin
सहजरुपमा हेर्दा जीवन सहज छैन । जीवनको आफ्नै नियम छ । जीवनको बाटो कहिले सिधा, कहिले मोड र कहिले उतारचढाव शैलीमा अघि बढिरहन्छ । हामी छौं र पो जीवन छ । जीवन नरहनु भनेकै हाम्रो एउटा जीवन अनन्त यात्रामा हिड्नु हो । एउटा जीवनको यात्रामा मैले भोगेका केही भाग्यमानी पलहरुलाई यहाँ बाँड्न खोजेको छु ।
घटना १ – जहाँसम्म सम्झना छ । मैले करिब आधा दर्जनपटक मृत्युलाई सकुशल जितेको छु । मेरो जन्म स्थायी बसोबासकै रुपमा काठमाडौंको असनमा भयो । त्यो समयमा म निकै छुकछुके र चकचके थिएँ । आमाबुबाको माया भनेकै यसलाई तह लगाउनुपर्छ भनेर होला । दिनमा अनेक कारणले मिठाईको रुपमा पिटाई खान्थे । असनबाट अलिपर साझा भवन छ । सँगै गणेशको मन्दिर । बिदा होस् वा नहोस्, मन्दिरमा चढार्ईएका लड्डुमा मेरो पहिलो अधिकार हुन्थ्यो । म हुँदासम्म अरु फुच्चेहरुले त्यो लड्डु लिन्न थियो ।
त्यसै समयको कुनै एकदिन बिजुली मर्मत हुँदै थियो । म फेरि निकै चलाख र विशेषज्ञकै रुपमा कसरी बिजुलीको फ्युज जोडिने रहेछ भनेर बिजुली बनाउन उक्लिएका मान्छे चढेको सिँढीमुनि सिधो घाँटी बनाएर हेर्दै थिएँ । एकाएक पूरै झ्याप्प अँध्यारो भयो । उठ्नेबेला वीरअस्पतालको बेडमा थिएँ ।
घटना २ – कुनै एउटा मिति वा समय । जुन ठ्याक्कै अनुमान भएन । म ७ कक्षा पढ्दाखेरि हो जस्तो लाग्छ । बुबाका साथीहरुको टोलीसँग मिसिएर हामी तातोपानी पुगेका थियौं । खासा बजारको नामले चिनिएको बजार पुग्दा दोलालघाट हुँदै बगेको नदीको कलकल आवाज अझै कानमा गुञ्जिन्छ । काठमाडौं फर्किने बेलामा पहेँलो रंगको बसमा चढ्न सबैले मरिहत्ते गरे । के कारणले होला कुन्नी, मैले ढिपी गरेर चढिन । बुबाले तान्न खोज्दापनि मानिन ।
सम्भवत त्यो बेला एक थप्पड हानेको हो की जस्तो लाग्छ । म अटेरी हुँदै अरु गाडी चढ्ने अडानमा थिएँ । त्यसपछि बुबाका साथीहरुपनि ओर्लिए । सब मसँग रिसाएका थिए । हामी केही मिनेटपछि अर्काे गाडीमा चढ्यौं । र, राजधानीतिर अघि बढ्यौं । करिब १० मिनेटपछि हामी सब स्तब्ध भयौं । बुबाका साथीहरुले मलाई स्याबास दिँदै यसले हामीलाई बचायो । भगवानले नै गर्दा यसले हामीलाई त्यो गाडीमा चढ्न नदिएको रहेछ भन्ने धाप मारे । सबैले चढ्न खोजेको बस दुर्घटनामा परेको थियो । धेरै घाइते र केहीको मृत्यु भएको हुनुपर्छ । हामी भने ‘झन्डै खत्तम भएको’ भन्दै मन चिसो पारेर काठमाडौं फर्कियौं ।
घटना ३ – २०६२ सालतिरको घटना हुनुपर्छ । पत्रपत्रिकामा म स्वतन्त्ररुपमा फोटो पठाउने गर्थै । त्यो बेला धेरै पत्रपत्रिकाले मैले पठाएको फोटो छाप्थे । नेपाल समाचारपत्र, राजधानी, स्पेश टाइम्स, हिमालय टाइम्सलगायतमा । यो सालमै म वाइबिएक्स बाइक चढेर टेकुस्थित कालो पुलबाट ललितपुर फर्किदैँ गर्दा ठूलो दुर्घटनामा परेँ । सानेपाबाट आउँदै गरेको एउटा ट्याक्सीले ठक्कर दिँदा अक्षयकुमारको फिल्मी शैलीमा म पूरै २० मिटर पर हुत्तिएको थिएँ । बाइक पूरै ध्वस्त बनेको थियो । तर, अचम्म मेरो शरीरमा कुनै सानो चोटपनि लागेन । हेर्न आएका दर्शकहरुले मलाई हेर्दे भन्दै थिए, ‘मान्छे चाहिँ भाग्यमानी रहेछ, केही भएनछ ।’
घटना ४ – मंसिर ७ गते बिहिबारको दिन । हामी (सुनुमाया र म) यो दिन सँगै थिएनौं । हाम्रो यात्रा हरेकदिन संयुक्त हुन्छ । हामी मध्ये कोही एक्लो हिड्यौं भने पनि सोध्नेहरुको मुखमा एउटै प्रश्न हुन्छ, ‘आज एक्लै हो ?’ सकेसम्म स्वदेशमै सुखदुःखको यात्रामा रमाएर अघि बढिरहेका छौं । १५ वर्षदेखि अनवरतरुपमा आजसम्म । जीवनसाथीले नयाँ काममा हात हालिन् । एउटा राम्रो योजनासहित खाद्य व्यापारमा अग्रसर भएकी गृहमन्त्री (उनी) को यो दिन चाँडै जाने काम थियो । र, म बिस्तारै एक्लै कार्यालय पुग्न करिब ९ बजेतिर निस्किएँ । महालक्ष्मीस्थान नाघेपछि दायाँ मोडमा गुडिरहँदा एउटा माइक्रो बतासिएर म चढेको स्कुटरलाई बायाँ ढालिदियो ।
स्कुटर नउठाई माइक्रो रोक्न सिंघम शैलीमा दौडिएर नजिकै पुग्न लाग्दा लगनखेलबाट आएको माइक्रोमाथि त्यो माइक्रो ठोक्कियो । एकैचोटि यात्रुहरुको चित्कार र रोदन सुनियो । म शून्य भएँ । मेरो ज्यानमा चोटपटक नलागेपनि र म सुरक्षित भएपनि यो दृश्य देखेपछि म शून्य हुँदै चिसिएँ । नमिठो दुख्यो । तर सन्तुलित हुँदै प्रहरीको कन्ट्रोल र ट्राफिक प्रमुखलाई जानकारी गराएँ । निकै भीड लाग्यो । सबै दर्शकमात्रै । त्यो चालकलाई धेरैबेरसम्म समातेर राखे । प्रहरी आएपछि घाइतेहरुलाई अस्पताल पु¥याएपछि त्यो बतासे चालकलाई प्रहरीमा सुम्पिएर म कार्यालय पुगेँ । त्यो चालकले मोडमै दुई महिलालाई किच्न खोज्दा महिला भित्तामा हुत्तिएर बचेका थिए । देख्ने प्रत्यक्षदर्शीहरुले एकपटक फेरि भन्दै थिए, ‘यो भाईको बाइकलाई ठक्कर दिँदै गएको थियो । भाई चाहिँ भाग्यमानी रहेछ ।’
मंंसिर ८ गते, शुक्रबार, २०७४
This entry was posted in दैनिकी, म र मेरो कुरा and tagged पत्रकार, पत्रकारिता, म र मेरो कुरा, मेरो लेख, subin shrestha. Bookmark the permalink.